Home » Tag Archives: ကှတျချစက္ခုဗေဒ
Tag Archives: ကှတျချစက္ခုဗေဒ
NEP မိုဘိုင်းယူနစ် FUJINON 4K UHD zoom မှန်ဘီလူးများရွေးချယ်
အဆိုပါ 2018 #NABShow မှာကှတျချစက္ခုဗေဒလီမိတက်နှင့်အတူရီ Amodea အင်တာဗျူး။ @NABShow
NABShow တိုက်ရိုက်ကှတျချစက္ခုဗေဒလီမိတက် ပတ်သက်. 2018 #NABShow မှာကှတျချစက္ခုဗေဒ Limited ၏က Les Zellan နှင့်အတူအင်တာဗျူး။ ဒီနှစ်
ပှဲအခမျးလှိုငျးစီးပြိုင်ပွဲစဉ်အတွင်း Demo နေ့ရက်များများအတွက် Fujifilm / FUJINON zoom နှင့်အတူတွဲအနီရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံ 8K ကင်မရာ
ပရီးမီးယားလိဂ် surfing ပြိုင်ပွဲများ၏တဦးတည်းစဉ်းစား, Volcom ပိုက် Pro ကိုကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းပိုက်လိုင်း surfers အတူတကွဆောင်ခဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားလှိုငျးစီးအဖွဲ့ချုပ် (WSL) အတွက်နှစ်စင်းဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအဖြစ်အပျက်ကနေတိုက်ရိုက်ရိုက်ကူးအပြင်, Red Bull တီဗီများအတွက် FUJINON ပရီးမီးယားလိဂ် PL 8-25mm နှင့် 300-19mm Cabrio zoom မှန်ဘီလူးများတပ်ဆင်ထား MONSTRO 90K VV အာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူအနီရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ် Cinema'sWEAPON အပေါ်ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ် ...
ကှတျချ S4 / i မှန်ဘီလူးတွေနဲ့ Serge Desrosiers, CSC, အညွန့် "သိန်ဘုရင်မကြီး"
သိန်ဘုရင်မကြီး, Serge Desrosiers, CSC (ခေါ်ဆာဂျီယို Di Rosa) က lensed တတိယရုပ်ရှင်, Incendo Productions နှင့်၎င်း၏ကေဘယ်လ်ကွန်ယက်ကို client ကိုတစ်သက်တာအဘို့, လူအများစုရိုးရာတစ်သက်တာလုပ်-for-TV ကိုရုပ်ရှင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအရာကိုနေထွက်ခွာသွားသည်။ "အပြစ်တရား၏အဘုရင်မငါ Incendo နှင့်တစ်သက်တာအဘို့ပြုပါတယ်ဆိုရုပ်ရှင်နဲ့မတူပဲဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူ၏ဒုတိယတစ်သက်တာရုပ်ရှင်, တစ်ခါတစ်ရံ Desrosiers ရှင်းပြခဲ့သည် ...
Fujifilm / FUJINON ရဲ့ MK မှန်ဘီလူးမှန်ဘီလူးစီးရီးအများအပြားအကောင်းဆုံး-များစာရင်းအတွက်ဂုဏျ
ဝိန်း, NJ - 2017 ၏ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကသူတို့ပစ်လွှတ်ကတည်းက Fujifilm ရဲ့ Optical ဖုန်းများအတွက် Division မှ zoom မှန်ဘီလူးများ၏ MK စီးရီး '' မှတ်ချက်ချစက်မှုလုပ်ငန်းက်ဘ်ဆိုက်များ, စာပမြေားနှင့်ရိုက်ကူးရေးကနေပေါ့ပါး, ပရော်ဖက်ရှင်နယ် zoom ကိုစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့စျေးနှုန်းအမှတ်မှန်ဘီလူးမှကျေးဇူးတင်စကားမြောက်မြားစွာဂုဏ်ပြုခံရခြင်းများခံရကြပြီ ။ အဆိုပါ FUJINON MK18-55mm အသိအမှတ်ပြုရှိသူများနှင့် MK50-135mm T2.9 zoom ကို T2.9 zoom များထဲတွင်နေသောခေါင်းစဉ်: အဘယ်သူမျှမရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကျောင်း ...
၎င်း၏ 2017mm F14 အနုပညာမှန်ဘီလူးနှင့်၎င်း၏ Cine high-speed Prime နှင့် zoom များအတွက် '' ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုကို '' အဘို့အ DPReview ထံမှဂုဏ်ပြုမယ့် '' တစ်နှစ်တာ၏ချုပ်မှန်ဘီလူး '' နှင့်အတူ Sigma ပွဲ 1.8
မှတ်တိုင်တစ်နှစ်7သစ်ကိုမှန်ဘီလူးနိဒါနျးနှင့် 26 ဆုကိုမြင်ခြင်းနှင့် Editor ကို Ronkonkoma, နယူးယော့ပုံစံ Picks - ဒီဇင်ဘာလ 21, 2017 - အမေရိက၏ Sigma ကော်ပိုရေးရှင်း, တစ်ဦးဦးဆောင်နေဆဲဓာတ်ပုံနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံမှန်ဘီလူး, ကင်မရာ, flash ပါနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၎င်း၏ 25th နှင့် 26th စက်မှုလုပ်ငန်းတက်ခူး ဆုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့် 2017 ၏ညိတ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယို Sigma Cine အမြင့်မြန်နှုန်း zoom နှင့် Prime ရှေးခယျြခဲ့ ...
အားလုံးရိုက်ကူးရေး Calling! Sigma ကုန်သွယ်ရေး Up ကိုအစီအစဉ် Sigma Cine မှန်ဘီလူးဝယ်ယူဆီသို့ပြန်လှည့်တပတ်ရစ် EF, E ကိုအပေါ် $ 350.00 အမေရိကန်ဒေါ်လာ, သို့မဟုတ် PL System ကိုတောင်ပေါ်ကမှန်ဘီလူးကိုပေးသနား
Ronkonkoma, နယူးယော့ - ဒီဇင်ဘာလ 7, 2017 - အမေရိက၏ Sigma ကော်ပိုရေးရှင်း, တစ်ဦးဦးဆောင်နေဆဲဓာတ်ပုံနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံမှန်ဘီလူး, ကင်မရာ, flash ပါနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ, အားလပ်ရက်များအတွက်အသစ်များကို Cine '' ကုန်သွယ်ရေး Up ကိုအစီအစဉ် '' ၏အားသာချက်ယူရိုက်ကူးရေးဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အရောင်းအဝယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ Sigma တစ် Cine မှန်ဘီလူးသို့မဟုတ်မှန်ဘီလူးအစုအဝေးကိုဝယ်ယူချွတ်, DPS ကင်မရာအော်ပရေတာကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နှင့်ရိုက်ကူးရေး $ 350.00 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ် ...
Fujifilm MK မှန်ဘီလူး၏လူကြိုက်များတတိယပါတီထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်အထောက်အပံ့ကိုဆွဲသား
မကြာသေးမီကမိတ်ဆက် FUJINON MK စီးရီး၏ကြီးထွားလာလူကြိုက်များမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, ကင်မရာနှင့်မှန်ဘီလူးထောက်ခံမှုပံ့ပိုးပေး note ကို ယူ. ယခု MK မှန်ဘီလူးပိုင်ရှင်တွေအတှကျအကြိုးနှင့်အပိုဆောင်းကင်မရာကိုတောင်ပေါ်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ Compatibility ကိုထပ်တိုးဖို့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအကွာအဝေးကိုဆက်ကပ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ FUJINON MK စီးရီးအသစ်ထောက်ခံမှုဂီယာနှင့်အတူသူတွေထဲမှာမှန်ဘီလူးထိန်းချုပ်မှု, ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသောခေါင်းစဉ်: Heden ...
Fujifilm ရိုက်ကူးရေးမှ FUJINON Cine zoom များအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာEmmy®ဝင်း Attributes
ဝိန်း, NJ - Fujifilm ၏ Optical ဖုန်းများအတွက်တိုင်းဟာရုပ်မြင်သံကြားအကယ်ဒမီဖြင့်၎င်း၏ FUJINON "ရုပ်မြင်သံကြားထဲမှာပုံရိပ်ပေး 4K Cine zoom မှန်ဘီလူးများ" အတွက်တစ်ဦးအင်ဂျင်နီယာEmmy®ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးနှင့် Loews မှာအကယ်ဒမီရဲ့အောက်တိုဘာလ 25 အင်ဂျင်နီယာဆုပေးပွဲအခမ်းအနားမှာဂုဏ်အသရေကိုလက်ခံရရှိဦးမည် ဟောလိဝုဒ်ဟိုတယ်၌။ အကြောင်းကိုယူဆောင်ရုပ်ရှင်ရုံ zoom မှန်ဘီလူးများ၏ FUJINON ရဲ့ Cabrio နှင့်ပရီးမီးယားလိဂ်စီးရီးများ၏နိဒါန်း ...
Canon ၏မှန်ဘီလူးမူလစာမျက်နှာတစ် 2017 သူဟာ Emmy ယူခဲ့!
Canon ၏မျက်ကပ်မှန်အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ခြင်း၏ရှည်လျားသောအစဉ်အလာရှိသည်နှင့်အနှစ်တစ်အရေအတွက်အောင်မြင်မှုများနည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်ရှေ့အပြေးသမားဖြစ်ရပြီ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်ဖြေရှင်းချက်၌ဤခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လယ်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအဆိုပါတီထွင်မှု 69K လယ်ကွင်းထုတ်လုပ်မှု zoom မှန်ဘီလူးများက၎င်းင်း၏ပြည့်စုံလိုင်းများအတွက် 4th နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာ & အင်ဂျင်နီယာသူဟာ Emmy ဆုပေးပွဲမှာအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။ ...
ဟောလိဝုဒ် Professional ကအသင်းမှသတင်းစာများကများအတွက် 2018 Tech မှသီးသန့်ခေါ်ဆိုမှုဖွင့်လှစ်
စက်မှုဝန်ကြီးဌာနညီလာခံအစီအစဉ်ကို defining အဆိုပြုချက် Los Angeles (စက်တင်ဘာလ72017) ရှာကြံ - ဟောလိဝုဒ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်း (HPA) ကို 2018 HPA Tech မှRetreat®များအတွက်အဆိုပြုချက်များအတွက်ခေါ်ဆိုခဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါပရိုဂရမ်၏ Key ကိုဝေမျှ - ပင်မပရိုဂရမ်တစ်ခုနှင့်နံနက်စာစားပွဲဝိုင်း - အဆိုပြုချက်အဘို့ဤခေါ်ဆိုခကနေတစ်ဆင့်ဆုံးဖြတ်ထားကြသည်။ အဆိုပါ HPA Tech မှသီးသန့်နေရာအရပ်ဖေဖော်ဝါရီလ 19-23 2018 ယူပါလိမ့်မယ် ...
အတူတူ Panavision, အနီရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံ, Canon, Blackmagic ဒီဇိုင်း, CW Sonderoptic နှင့် Sony မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ, ချက်ပြုတ်စက္ခုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်ပြန်ကြေညာသောအခါ, က Les Zellan, ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ပိုင်ရှင်, NAB မှာကှတျချစက္ခုဗေဒဒီနှစ်အသုံးပြုပုံမှန်ဘီလူးနည်းပညာမှတ်တိုင်တစ်ခုရောက်ရှိခဲ့သည် PL နှင့် / i နည်းပညာအပေါ်ကိုရှေးခယျြ Panavision တောင်ပေါ်မှာမျက်ကပ်မှန်ကနေမှန်ဘီလူး metadata ကိုများစုဆောင်းခြင်းစံဖို့ -defining စီမံကိန်းကို ...
အဆိုပါမီဒီယာထုတ်လုပ်ရေးပြရန် 8 မှာ 35K S2017 ကင်မရာများကို Highlight မှအနီရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံ
အနီရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံဟာ Olympia လန်ဒန် (အနောက်ခန်းမ) မှာနေရာအရပ် 2th နှင့် 13th ဇွန်လကြာသောမီဒီယာထုတ်လုပ်မှုပြရန်, ရန်၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ် DSMC14 ကင်မရာများဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ တက်ရောက်လာသည့်အနီရောင် VIP အတွေ့အကြုံ Lounge များတွင်ဟီလီယမ်™အာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူအနီရောင် EPIC-W ™နှင့်WEAPON® 8K S35 ၏ဆန္ဒပြပွဲများကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူနှင့်အတူအစည်းအဝေးများ * ကိုလည်းအနီရောင် VIP အတှေ့အကွုံရာယူပါလိမ့်မယ် ...
နယူး Sigma Cine နှင့် Global Vision ၏မှန်ဘီလူးဗိုလ်မှူးစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဂုဏ်ပြုခံရခြင်းများရယူနိုင်သော
ယင်း၏နေဆဲဓာတ်ပုံမှန်ဘီလူးနှစ်ခု TIPA ဆုပေးပွဲနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် Imaging ကသတင်းထောက် 2017 လက်လီကုမ္ပဏီများ '' Choice Award ဆုနှင့်အတူဂုဏ်ပြု; StudioDaily ချုပ်, ပြရန်၏ NewBay အကောင်းဆုံးနှင့် ProductionHub Excellence Awards ဆုပေးပွဲက၎င်း၏အောင်မြင်မှုများ Cine မှန်ဘီလူး Ronkonkoma နယူးယောက်များအတွက်အားလက်ခံတွေ့ဆုံ - မေလ 4, 2017 - အမေရိက၏ Sigma ကော်ပိုရေးရှင်း, တစ်ဦးဦးဆောင် DSLR များနှင့် Cine မှန်ဘီလူး, ကင်မရာ, flash ပါနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ, ခြောက်လဂုဏ်သတင်းတက်ခူး။ ..
NAB 2017: Fujifilm ရဲ့ပထမဦးစွာ NAB နာယကစီးရီး Note Feature ကိုရုပ်ရှင်, VFX နှင့်ဖျော်ဖြေပွဲရိုက်ကူးရေးပါဝင်သည်
ဝိန်း, NJ - Fujifilm ၏ Optical ဖုန်းများအတွက်တိုင်းဟာ NAB စည်းဝေးကြီးအတွင်း, စက်မှုလုပ်ငန်းထိပ်တန်းရုပ်ရှင်ပညာပညာရှင်များအချို့ featuring ၎င်း၏ပထမဆုံးစပီကာစီးရီးကိုင်ပါလိမ့်မယ်။ speakers မှတ်ချက်ချ feature ကိုရုပ်ရှင်, တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်ကြီးမားသော-နေရာဖျော်ဖြေပွဲရိုက်ကူးရေးအပါအဝင် FUJINON မှန်ဘီလူးအသုံးပြုသူကျယ်ပြန့်, ကိုယ်စားပြုပါလိမ့်မယ်။ NAB တို့ Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌ဧပြီ 22-27 ထံမှပြေး။ ဤသည်ကုမ္ပဏီ၏ပထမဦးဆုံးခြေတစ်လှမ်း ...